Uma une amasonto amabili ukuchitha eSpain, enye yezindlela ezingcono kakhulu yokwenza emhlabeni ukuhlola iSpain zemininingwane. ngeke nje lokhu zikuvumela ukubona nezindawo Amazing ezweni lonkana, kodwa isitimela sokuvakasha eSpain esebenza kahle kakhulu futhi kulula. Inkinga enzima ukuthenga athenge amathikithi esitimela ngemali. Indlela engcono kakhulu ukuthenga yakho athenge amathikithi esitimela ngemali ukuya eSpain ngesitimela inthanethi. Kunamawebhusayithi amaningi akuvumela ukuthi wenze lokhu. Isihluthulelo siwukuba uthole eyodwa okusebenzela kangcono ngokuya lula ukusetshenziswa, ulimi, nebhajethi. Ukuthenga amathikithi akho ekuseni ikuvumela ukuthatha inzuzo yezingozi ngamazinga ezikhethekile kanye nokuqinisekisa ukuthi uthola ungene izitimela ufuna ngaphambi kokuba abe ibibhukelwe ngokugcwele.
Hlela kusengaphambili bese u-oda amathikithi akho kusengaphambili ukuze uthole okuhle isitimela ikhambo lakho. Sibheke le Wemaviki lamabili uhambo I-uzihambela iSpain zemininingwane. Lokhu makube isiqondiso uhambo olulandelayo.
Lona dolobha Spanish futhi ukuxuba ezinhle amadala namasha, nge amapaki nenhle, yezitolo Amazing, vibey nightlife futhi yebo endaweni Malasana. Madrid futhi iyikhaya eziningana iminyuziyamu Spain ephezulu. Imisebenzi eminingi endlini wonke amazwe omhlaba. Ngoba kukhona okungaka ukwenza kuleli dolobha ukuze wakho 3 izinsuku lapha kuyoba kahle esetshenziselwa. Kuyinto isiqalo esihle ukuba uhambo lwakho wemaviki lamabili kanye lula ukuthola isitimela noma yikuphi lapha. IMadrid Atocha iyisiteshi sesitimela esitholwa yinkampani yezitimela esemthethweni iRenfe, futhi lesi siteshi sesitimela singesinye sezinhle kakhulu zezitimela eSpain.
Lo muzi yikhaya le-impikiswano Ukujahwa Yizinkunzi okwenzeka ngoJulayi unyaka nonyaka, kodwa kukhona okuningi ukuze Pamplona kunalokhu. It esisogwini phezulu egqumeni esifundazweni Navarre okusho kukhona ukubukwa Amazing we izintaba nezigodi ngezansi. Lihlanzekile leli dolobha futhi ezincane okwenza kube lula ukuhamba emhlabeni amukele izakhiwo amahle umlando. Kunebha enempilo ne-tapas izigcawu unyaka wonke. Ungaphuthelwa ukuhamba nge Old Town noma sithungatha umlando indlela eyathathwa ngesikhathi Ukugijima Yizinkunzi. Ekugcineni, lo muzi futhi kalula kusuka San Sebastian futhi emfushane ngesitimela kude.
Leli dolobha lasolwandle kufanele libe ngelinye lamadolobha aziwa kakhulu futhi adumile eSpain, futhi akusho ukudanisa! Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ezobuciko namasiko, izakhiwo, izinsuku lazy phezu lolwandle, amaphathi ubusuku bonke, noma nje ukuhlola idolobha elisha, kukhona okuthile kwawo wonke umuntu Barcelona. Ungaphuthelwa Sagrada Familia, okuyinto ingenye izakhiwo esimangalisa kunazo ezweni lanamuhla sika. ISpain zemininingwane inikeza izitimela njalo kusukela Pamplona ukuba Barcelona futhi kukhona kuphela uhambo lwamahora amane eliphakathi kwale mizi emibili.
Ukuhlanganisa banomuzwa Mediterranean nge nesiko art yesimanje nokuthuthukiswa kungenzeka uma uvakasha iSpain zemininingwane, Malaga zingatholakala ku Spain oseningizimu Costa del Sol. Isikhungo sedolobha sisanda kuvuselelwa futhi sihlanganisa i- Isonto lombhishobhi iGothic nemigwaqo emincane yabantu abahamba ngezinyawo bangezikhathi zakudala nge imigoqo kanye hip zokudla zesimanje. Malaga anezinye amabhishi liyamangalisa ngempela ukuvakashela futhi izintaba ebabazekayo nxazonke. Ungaphuthelwa ekhuphuka eya Gibralfaro Castle ngokubuka okuphefumulayo kokushona kwelanga okuhle kakhulu kwe-Andalusi kanye nedolobha. Kukhona izitimela egijima nsuku zonke kusuka Valencia ukuba Malaga.
Seville kuphela emfushane ngesitimela kusuka Malaga futhi nje emangalisa. Cabanga emuva umbuso wamaRoma ukuze uthole umbono wokuthi look futhi uzizwe kulo muzi kuhlanganisa tincenye lezinkathi zomlando eziningi. Kukhona okuningi ukwenza emzini, kusukela ukuhlola edolobheni ezulazulayo kanye ngekota Arenal elaseThiyathira nokuhambela zokudlela fabulous noma ukubukela ukulwa kwezinkunzi okubukelwa e indandatho zomlando leli dolobha. Ungaphuthelwa Ukuvakashela Cathedral Seville futhi Alcázar, ebisetshenziselwa ukuqopha izigcawu zohlelo oludumile lwe-TV iGame of Thrones. Izitimela ukusebenzisa nsuku zonke kusuka Malaga ukuba Seville futhi kusukela Seville emuva Madrid lapho esikhumulweni sezindiza zamazwe ngamazwe kuyinto.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspain-by-train%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)